मन्त्री अर्याल र कांग्रेसको बिरोध, भएकाे के थियाे ? (घटनाको चर्चा सहित) | आँधीखोला खवर
मन्त्री अर्याल र कांग्रेसको बिरोध, भएकाे के थियाे ? (घटनाको चर्चा सहित)
राधाकृष्ण डुम्रे २६ पुष २०७७, आईतवार ०९:४९ 50 | SHARE Facebook twitter
शनिवार दिनभर निक्कै चर्चामा रहेको बिषय हो मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललाई आफ्नै गृह जिल्लामा कांग्रेस कार्यकर्ताले गरेकाे बिराेध । घटनाको बारेमा पोष्ट गर्न बिभिन्न कुरा लेख्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ता निक्कै सक्रिय देखिन्थे । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको अवस्था हेर्दा लाग्थ्यो घटना निक्कै ठूलो हो । सञ्जालमा सक्रियता देखाउनेहरुमा कांग्रेस कार्यकर्ताको अलवा नेकपा कै प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ता पनि थिए । कांग्रेस कार्यकर्ताहरु भन्दा नेकपा कै प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ताको स्टाटस र कमेन्ट निक्कै कडा थियो ।
मन्त्री पद्मा अर्याललाई आफ्नै गृहजिल्लामा बिरोध गरिएको समाचार ठूला मिडियाहरु कान्तीपुर, बाह्रखरी लगायतमा थियो भने केही जिल्ला बाहिरका अनलाईनहरुमा अली कडा समाचार पोष्ट गरेको देखियो ।
कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले बिरोधका क्रममा खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएका भिडियोहरुका आधारमा समाचार आएको बुझ्न सकिन्थ्यो ।
भएको के थियो :
नेपाली काँँग्रेसको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार शनिवार ३३० वटा प्रदेशमा विरोधसभा भईरहेका बेला स्याङ्जाको वालिङमा पनि प्रदेश स्तरीय बिरोध कार्यक्रम भएको थियो । वालिङमोड कांग्रेसको कार्यक्रम चलिरहेको थियो कार्यकर्ताहरुको बाक्लो उपस्थिती थियो भने नाराहरु पनि कडा लागि रहेका थिए । सोही समयमा नेकपा ओली समूहको कार्यकर्ता भेलालाई सम्वोधन गर्न मन्त्री अर्याल आउदै गरेको जानकारी कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले पाएको हुनुपर्छ ।
अर्काेतर्फ मन्त्री अर्याल कांग्रेसको आन्दोलनलाई प्रभाव नपार्ने गरी आँधीखोला करिडोरको बाटो हुँदै कार्यक्रम स्थल सिटिहलमा गएको देखिन्छ ।
मन्त्री अर्याल करिडोरको सडक हुँदै जान लागेको थाहा पाए पछि नेविंघ र तरुणदलका कार्यकर्ता पतन्जली नजिक करोडोरमा पुगेका थिए उनीहरुले त्यही नाराबाजी गरे कालोझण्डा देखाए । मन्त्रीको गाडी आफ्नै रफ्तारमा कार्यक्रम स्थल तर्फ गएको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्थ्यो ।
मन्त्री अर्यालको अगाडि सुरक्षाको स्कटिङ थियो पछि अन्य नेताहरुको गाडी पनि थियो कच्चि सडक भएर होला गाडीहरु धुलो उडाउदै गएका थिए । गाडी हिडिरहेको ठीक अर्काे साईडमा तरुणदल तथा नेविंघका कार्यकर्ताहरुले नारावाजी गरिरहेका थिए । बीचमा प्रहरी थियो जसले आन्दोलनकारीलाई नजिक जान दिईरहेको थिएन । मन्त्रीको अगाडि मोटरसाईकलमा आएका युवासंघका नेता बिजयबिक्रम खाँण लगायतले आन्दोलनकारी युवाहरुलाई शान्त रहन र अगाडि नआउन भनिरहेका थिए ।
आन्दोलनकारीले आफ्नै गतिमा बिरोध गरे भने मन्त्री सहितको गाडी आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्यो ।
मन्त्री र आन्दोलनकारी भेट भएको ठाँउमा त्यस्तौ कुनै घटना भएको थिएन भने मन्त्री भाग्नुपर्ने स्थिती पनि थिएन ।
यो पनि पड्नुहोस.. कोरोना परिक्षणको शुरुवात पछि धन्यवाद दिदै नेता श्रेष्ठले भने अव दायरा बढाउनु पर्छ ।
के घटना पूर्ब नियोजित थियो ?
कांग्रेस कार्यकर्ताहरुको आन्दोलन हेर्दा लाग्थ्यो उनीहरुले मन्त्री अर्यालको बिरोध गर्ने, कालोझण्डा देखाउने कार्यक्रम पूर्ब नियोजित थिएन । केन्द्रीय कार्यक्रम अनुशार कांग्रेसले बिरोध गरिरहेको समय र मन्त्री आउने समय एकैपटक भएकाले नै यो अवस्था आएको हो । यदी कांग्रेसको कार्यक्रम सकिएपछि अर्थात आधा घण्टा पछाडि मन्त्री आएको भए केही हुने थिएन किनकी कांग्रेस कार्यकर्ता आन्दोलन सकेर लाखापाखा लागि सकेका हुने थिए । नेकपाको प्रशिक्षण कार्यक्रम र आन्दोलनको मिति वा समय फरक भएको भएपनि केही हुने थिएन ।
दुबैपक्षको सुझबुझ प्रशंशा योग्य :
शनिवार अवेर नेकपाले निकालेको प्रेस बिज्ञप्ती अनुशार मन्त्री अर्याललाई प्रशासनले बैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर सिटिहल जाने प्रस्ताव गरेको थियो जुन मन्त्री अर्यालले स्वीकार गरी आँधीखोला करिडोरको बाटो गएको देखिन्छ । जुन निक्कै सुझबुझको निर्णय हो । किनकी मन्त्री अर्याललाई युवा संघका कार्यकर्ताहरुले स्कटिङ गरेका थिए उता कांग्रेसको आन्दोलनमा पनि युवाहरुको बाक्लो उपस्थिती रहेको थियो । यदी मन्त्री अर्याल आन्दोलन भइरहेको ठाँउबाट आएको भए कुनै अप्रिय घटना हुनसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । कांग्रेसका नेताहरुका अनुशार मन्त्री अर्यालको बिरोध गर्ने कुनै पूर्ब निर्धारित कार्यक्रम थिएन त्यो संयोग मात्रै परेको हो ।
संसद बिघटनको असर :
प्रधानमन्त्री ओलीको संसद बिघटन गर्ने निर्णय पछि कांग्रेस लगायत नेकपा कै प्रचण्ड नेपाल समूह सडकमा छन्, उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओली सहित प्राय सबै मन्त्रीहरु जिल्लामा जाँदा बिरोध गर्ने,कालोझण्डा देखाउने गरीरहेकै छन् शुक्रबार ओली सहभागी घनगढीको कार्यक्रममा पनि बिरोध भएको थियो, बुटवलमा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडलको तथा बिभिन्न ठाँउमा जाँदा सरकारका मन्त्रीहरुको बिरोध भई नै रहेको छ । स्याङ्जामा पनि त्यही भएको हो । अझ भनौं स्याङ्जा शान्त छ यदी कांग्रेसको बिरोधको कार्यक्रम र मन्त्री आउने समय एकै नभएको भए यो घटना पनि हुने थिएन ।
यो पनि पड्नुहोस.. सरकारी तहबाट नै बिश्वप्रशिद्ध शालिग्राम शिलालाई विवादमा पारियो,कालिगण्डकी 'ए'ले स्थानीयतहलाई रोयल्टी बुझाएन-सांसद मल्ल ।
मन्त्री अर्यालको पैदलयात्रा :
मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गरेपछि वालिङ मोड सम्म पैदल यात्रा गर्नु भएको थियो । यदी बिरोध नै हुने भए यो समयमा पनि हुने थियो ।यसले के पुष्टी गर्छ भने दुबै पक्षको कार्यक्रमको समय एउटै हुनु घटनाको मुख्य कारण हो ।
के जिल्लामा मन्त्रीको बिरोध हुनै पर्ने अन्य कारण छन्
लेखकलाई लाग्दैन की मन्त्री अर्यालको अन्य कारणबाट जिल्लामा बिरोध नै हुनु पर्ने अवस्था छ । अर्याल वालिङ आउदा सामाजिक खालका सबै कार्यक्रममा कांग्रेस कार्यकर्ताहरुको बाक्लो उपस्थिती रहने गरेको छ । वालिङ नगरपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट बिजयी मेयर तथा उपमेयर छन् तर उनीहरु पनि मन्त्री सहभागी कार्यक्रममा निक्कै प्राथमिकताका साथ सहभागीहुँदै आएकाछन् । अर्याल यो क्षेत्रमा तत्कालिन एमालेबाट निर्वाचित भए पनि नगरपालिकाको नेतृत्वले समन्वय गर्ने कार्य गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । बर्तमान् बिषम परिस्थीती कै कारण यस्ताे अवस्था अाएकाे हाे । तस्वीर : हाम्राकुरा
स्याङजामा नेकपाका दुबै समूहको सक्रियता बढ्यो, यस्तो छ गृह जिल्लामा
पत्रकार आचारसंहिता र कोभिडले मिडियामा पारेको प्रभाव विषयक अन्तरक्रिया ।